Daabacaadda Chartbeat: Real-Time Analytics Web | Martech Zone
Daabacaadda Chartbeat: Real-Time Analytics Web
Talaado, Juun 11, 2013 Monday, June 10, 2013 Douglas Karr
Bogagga sida joogtada ah wax u daabacaya ee ka shaqeynaya sidii ay ula wareegi lahaayeen taraafikada isla markiiba iyada oo loo marayo xogta isbeddelaysa, barnaamijyada tirakoobka-waqtiga dhabta ah sida Chartbeat kaa caawin kara bixinta aragtida ganacsigaaga u baahan yahay.
Faa'iidooyinka Muhiimka u ah Daabacayaasha Chartbeat waxaa kamid ah
Ogaanshaha sheekooyinka ay akhristayaashaadu u hibeeyaan waqtigooda iyo taxaddarradooda si aad istiraatiijiyad ugu yeelan karto taada hawlgelinta sare content.
Markaad aragto sida saxda ah dhagaystayaashaada dhibcood, si aad ula qabsan karto waxyaabahaaga oo aad u sii haysato akhristayaashaada boggaaga.
Aqoonsiga noocyada mawduucyada lagu caddeeyay kuwa ugu caansan iyada oo loo marayo saamiyada warbaahinta bulshada.
Daawashada fikradaha fiidiyowga ee kabaxsan ciyaarta aasaasiga ah bilow - eeg waxa fiidiyowga kujira uu hayo daawadayaashaada ' dareenka.
Cabbiraadda Wakhtiga La Galay waxay kaa caawineysaa inaad la socoto waxa ay u badan tahay inay dhisaan dhagaystayaal soo noqonaya.
Chartbeat waxay dhistay qodobo badeecado ah oo ka caawiya dhamaan kooxahaaga inay fahmaan sida dhagaystayaashaadu ula kulmaan dhammaan waxyaabahaaga. Kooxahaaga ayaa dejin kara, wadaagi kara, oo cabiraya yoolalka, iyagoo adeegsanaya halbeegyo isku mid ah oo tayo ku saleysan.
Tags: Analyticsgaraacisfalanqaynta shaxdawaqtiga rasmiga ahtirakoobka bulshada
5 Siyaabood oo Macaamiishaada Loogu Dareemo Dareen Jacayl
Deegaanka: Falanqaynta barnaamijka moobilka iyo suuqgeynta barnaamijka